It is me. Ko Niknayman.: နအဖအလံကြီးဇောက်ထိုးဆွဲထား။ နအဖ ပြုတ်ကျရန် နီးနေပြီ။
နိုဝင်ဘာလ (၁၂)ရက်နေ့ ထုတ် နအဖသတင်းစာများဖြစ်သော မြန်မာ့အလင်း နှင့် ကြေးမုံသတင်းစာတို့ တွင် နအဖ၀န်ကြီးချုပ် နှင့် ဗီယက်နမ်သမ္မတတို့ တွေ့ ဆုံစဉ် ဓါတ်ပုံထဲတွင် နအဖအလံကြီး စောက်ထိုး ဆွဲချိတ်ထား ကြောင်း တွေ့ ရပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 7:42 AM